I-CNC Machining Blog | I-PTJ Hardware, Inc.
Ikhaya > Blog
yini elawula imishini yokukhiqiza, efana nemishini yokubhola, imishini yokugwedla, nemishini yokugaya?
yini elawula imishini yokukhiqiza, efana ne-drill, lathes, ne-milling machines? Ithuluzi lomshini we-CNC yisifinyezo sethuluzi lomshini wokulawula wedijithali, okuyithuluzi lomshini elizenzakalelayo eline-system control system.
Ukusetshenziswa kwe-3D Laser Scanning Metal Mine Goaf Survey
Ezimayini ezijulile zezimayini, hhayi nje kuphela ukuthi zinezidingo eziphezulu zobuchwepheshe bezimayini, kodwa futhi zibeka nosongo olukhulu ekuphepheni kwezimayini. Ukuqinisekisa ukusebenza ngempumelelo nokuphephile komsebenzi wezimayini, ubuchwepheshe bokuskena i-3D laser busetshenziswa njengobuchwepheshe bokukala obuthuthukile. , Isetshenziswe kancane kancane ezimayini. I-athikili ihlaziya ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokuskena kwe-laser ezinhlangothini ezintathu ekulinganisweni kwezimbuzi ezimayini zensimbi, futhi inikeze nezethenjwa zabantu abakule mboni efanayo.